Amazon: gini bu ihe na ihe bu akuku azu ya | ECommerce ozi ọma
Gịnị bụ Amazon?
Amazon SL (obere mmekorita) bu a ụlọ ọrụ sitere na USA, isi ahia ya bu e-commerce na oru igwe ojii.
Isi ụlọ ọrụ ya bụ obodo seattle na steeti US nke Washington. Amazon bụ otu n'ime ndị ụlọ ọrụ mbụ na-enye ma na-ere ngwaahịa na ịntanetị na nnukwu ọnụ ọgụgụ na ụkpụrụ ya bụ "Site A ruo Z" (Site A ruo Z)
O jisiri ike mepụta weebụsaịtị zuru oke maka ọtụtụ ahịa nke ọ dị na ụwa dịka
UK na Ireland
N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ a nwere ike nye ngwaahịa dị iche iche nke mba ndị ahụ. Na mba ndị ọzọ ebe Amazon dịkwa ugbu a, ọ na-arụ ọrụ ọrụ aka, dịka Costa Rica, ebe ọ bụ na ebe ahụ si na-eme ka ndị ahịa mara na Latin America ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na mba a nke nwere ndị ọrụ na-erughị ndị ọrụ 7.500.
Amazon bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị kasị ukwuu n'ụwa, ebe ị pụrụ ịchọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ịchọrọ dị ka ọ dị ezigbo anya na mmadụ na-ere ya.
E hiwere ụlọ ọrụ Amazon na 1994 site n'aka Jeff Bezos mgbe ọ hapụsịrị ọrụ ya dị ka osote onye isi oche nke DE Shaw & Co. n'otu afọ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ Wall Street.
Mgbe ọ kwụsịrị arụkwaghịm, Bezos kpebiri ịkwaga Seattle ma ọ bụ ebe ahụ ka ọ malitere ịhazi atụmatụ azụmahịa pụrụ iche site na ,ntanetị, nke oge mechara bụrụ ihe anyị niile maara ugbu a dịka ụlọ ọrụ Amazon.com.
1 Kedu ka esi mụọ echiche maka Amazon
2 Di iche iche nke aha tupu Amazon
2.1 Gịnị kpatara Amazon?
3 Akara Amazon
4 Usoro iheomume na mbu ahia ahia
5 Ụdị ahịa ọhụrụ
7 Taa Amazon
Kedu ka esi mụọ echiche maka Amazon
Onye guzobere Amazon, ịbụ onye nyocha nke Wall Street, mgbe ọ gụsịrị akụkọ na nyochaa ahịa ịntanetị na ọdịnihu ya, achọpụta na ọ na-atumatu olu mmụba kwa afọ nke 2.300% na azụmaahịa weebụ.
Mgbe ọ matara nke a, o kpebiri ike a obere ndepụta nke ngwaahịa ndị o chere na a ga-ere dị nnọọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe ịzụ ahịa site na ịntanetị na ihe ọ nwetara ndepụta naanị ngwaahịa 20 mana ọ ka dị ogologo oge ya mere ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ na ya iji belata ya 5 nwere ike ịga nke ọma ngwaahịa maka azụmahịa na ọ na-achọ.
Na njedebe, ka emechara nyocha na nhọpụta zuru oke, o kpebiri na ụdị azụmaahịa zuru oke maka ihe ọ na-achọ ga-abụ akwụkwọ ebe ọ bụ na akwụkwọ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ chọrọ nnukwu.
Mkpebi a bụ ihe ịga nke ọma zuru ezu N'ihi ọnụahịa dị ala nke akwụkwọ ndị ahụ ọ gbakwunyere na nnukwu aha edemede ya nwere na ngwaahịa
Stlọ ahịa akwụkwọ Amazon jisiri ike nweta ụdị ihe ịga nke ọma nke na naanị ọnwa abụọ mbụ nke ndụ. A rere ahia ahụ karịa mba 45 dị iche iche gụnyere United States. Ahịa ya ruru $ 20.000 kwa izu.
Di iche iche nke aha tupu Amazon
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na a kpọghị Amazon na nke ahụ site na mmalite ya, nwere ọtụtụ aha maka ebumnuche dị iche iche tupu Jeff Bezos erute na nke anyị niile na-amata n’atụghị ụjọ taa.
Mgbe Bezos mepụtara ụlọ ọrụ ahụ na 1994, o kere ya n'okpuru aha “Cadbra"Mana ọ gbanwere aha a mgbe ọka iwu gbagwojuru ya anya" ozu ", n'otu afọ ahụ, ọ nwetara ngalaba URL"relentless.com”Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ nwere ogologo oge (ọ bụghị ihe karịrị otu afọ) aha ahụ na ntanetị mana ndị enyi guzobere ya kwenyesiri ike na aha dị otú ahụ adịghị mma ma ọ bụ na-enwu enwu maka ụlọ ọrụ ya dịka ọ dị ka, , dịtụ njọ ka Bezos, were okwu ahụ site na akwụkwọ ọkọwa okwu, kpebiri ịhọrọ aha Amazon.
Gịnị kpatara Amazon?
Jeff Bezos họọrọ aha a n'ihi na Amazonas bu ebe sara mbara, di uku na ebe di iche rue ihe mara mmadu na o choro ka ulo ahia ya daba na nkowa a kwa, osimiri kachasiri elu n’uwa uwa bu osimiri Amazon ma choro ka ulo ahia ya buru ulo ahia kachasi n’uwa n’uwa.
Ka ọ na-erule June 19, 2000, e jirila okwu ndị ọzọ gosipụta akara ngosi Amazon akụ a gbagọrọ agbagọ nke na-egosi na ọ bụ nnukwu ịmụmụ ọnụ ọchị, Ahịrị a jikọtara mkpụrụedemede akọwapụtara abụọ: "a" na "z", nke na-anọchite n'ụzọ zuru oke na onyogho na enweghị nghazi, ụkpụrụ ya, nke chọrọ igosi na ụlọ ahịa ahụ nwere ihe niile ị nwere ike ịchọ site na "a" To "z"
Usoro iheomume na mbu ahia ahia
Dị ka anyị kwurula, Emepụtara Amazon n'afọ 1994, na steeti Washington, companylọ ọrụ ahụ na-ere akwụkwọ mbụ ya na 1995, Ka ọ na-erule October 1995, Amazon na-ekwupụta ọkwa ọhaneze.
En Na 1996, ekpebie ka ị banye ọzọ na Delaware.
Amazon ebupụta mbido ihu ọha ya nke mbak na Mee 15, 1997 na mgbe ahia n'okpuru NASDAQ ticker AMZN, ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ n'oge ahụ na-ere ahịa na ọnụahịa nke $ 18 maka nke ọ bụla.
Atụmatụ azụmahịa nke Amazon kpebiri ịga na mmalite bụ ihe ọhụrụ na ihe a na-atụghị anya ya. Companylọ ọrụ ahụ atụghị anya na ha ga-enweta uru ruo mgbe afọ anọ ma ọ bụ ise gachara, na ụdị uto a "nwayọ nwayọ", ndị na - eketa oke malitere ime mkpesa na ụlọ ọrụ ahụ anaghị erite uru ngwa ngwa iji gosipụta itinye ego ya, na ọbụnadị na ọ bụ ọ gaghị aba uru. ọ dabara maka ndụ ogologo oge.
Amazon lanarịrị mmalite nke narị afọ na nsogbu niile nke a na-anọchi anya, na-eto wee ghọọ nnukwu weebụsaịtị na ntanetị n'ịntanetị.
Na njedebe nwetara uru mbụ ya na nkeji nke anọ nke afọ 2001 Nke ahụ bụ $ 5, nke pụtara na ọnụahịa ngwaahịa ahụ bụ 1 pasent, na ego ha nwetara karịrị $ XNUMX ​​ijeri.
Mgbe a malitere ịhụ obere oke uru a na-agba ume, ọ gosipụtara ndị nwere obi abụọ na ụdị azụmahịa azụmaahịa Jeff na-ebu amụma na ọ ga-aga nke ọma.
Maka afọ 1999, Time magazine mara Jeff Bezos dị ka onye nke afọ, si otú ahụ na-achọpụta nnukwu ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ.
Mana Amazon.com anaghị edozi maka ụdị ọ chọtara, ya mere, ọ kwupụtara na October 11, 2016 atụmatụ ya iji wuo ụlọ ahịa brik na-ngwa agha ma mepụta isi ihe nchịkọta akụkụ maka nri.
Wasdị azụmahịa ọhụrụ a ka akpọrọ "Amazon Gaa”(Amazon ga-aga), mepere ndị ọrụ Amazon na Seattle na 2016.
Nke a ụlọ ahịa ọhụrụ na-adabere na iji ihe mmetụta dị iche iche ma nwee ike ibufe akaụntụ Amazon na-akpaghị aka ka ha na-ahapụ ụlọ ahịa ahụ, enweghị usoro ndenye ọpụpụ.
Agbanyeghị na o were ogologo oge, ụlọ ahịa mechara mepee ọha mmadụ na Jenụwarị 22, 2018.
Mana ọ bụghị ihe niile dị mfe dịka ọ dị ka ọ dị, enwere ihe ndị ọzọ dịka Barnes & Noble gbara akwụkwọ na Amazon na May 12, 1997, o boro ebubo nke Amazon: "Largestlọ ahịa akwụkwọ kachasị ibu n'ụwa" bụ ụgha, onye gbara akwụkwọ ahụ kwuru, sị: «Ọ bụghị ụlọ ahịa akwụkwọ ma ọlị, bụ akwụkwọ gị n'ụlọnga ».
Mgbe ahụ, ọ bụ oge nke Walmart gbara akwụkwọ na Amazon na October 16, 1998, otu a boro ebubo na Amazon zuru izu nzuzo nzuzo ya dịka ọ goro ndị bụbu ndị isi Walmart.
Edoziri nsogbu abụọ a site na mmeghe na enweghị ụlọ ikpe.
Ọ bụ ụdị azụmaahịa dị jụụ ma na-akwụ ụgwọ, na o mezuru gbara afọ iri abụọ na Mee 15, 2017 ebe ọ bụ na ọ malitere ahia na Nasdaq.
El Ahịa ahịa Amazon ruru ihe ruru ijeri $ 460.000, si otú a na-enye ya ohere ka etinyere ya dị ka ụlọ ọrụ nke anọ kachasị na nke nwere ihe ịga nke ọma na ndekpọ S&P 500 (Standard & Poor's 500), dị n'etiti ụlọ ọrụ Microsoft na Facebook.
Ndị ahịa Amazon bidoro afọ iri site na 2000 ruo 2010 ruo mmadụ nde 30.
Ejiri Amazon.com dị ka mkpọsa saịtị ahụ bụ isi ya na udiri ugwo ahia.
Ihe Amazon.com na-enweta sitere na itinye pasent nke ngụkọta ọnụahịa ọ bụla nke ihe ọ bụla etinyere ma nye n'ime weebụsaịtị gị.
Ugbu a Amazon na-enye ụlọ ọrụ ohere ịkpọsa ngwaahịa ha site na ịkwụ ụgwọ ha ka edepụtara ha dị ka ngwaahịa.
Amazon nwekwara nwere:
Ihe nkiri ntanetị Intanet (IMDb)
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Gịnị bụ Amazon?
Ekele m, ọ dị m ka ya bụrụ na anyị niile bụ ndị ọchụnta ego dị ka gị
Zaghachi Francisco rodriguez
Tomas Sanchez dijo
Achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ .n'ihi na ihe ịga nke ọma na-ekwu .yo nwere ike ịzụta mbak .ihe bụ uru ọ bụla òkè.
Zaghachi Tomas Sánchez
Ọ dị ezigbo mma na ụlọ ọrụ ọ bụghị naanị na-ekpughe ihe ọ rụzuru kamakwa ọdịda ya, nke ahụ na-enye ntụkwasị obi. Ekele m
Zaghachi Elmis Ladeus
Alicia warrior dijo
Ekele sitere n'aka Bezos na ndị ọchụnta ego ọhụụ nwere ohere. Ha bụ ihe atụ doro anya na ịchọrọ bụ ike ma ọ bụrụ na mmadụ etinye ya. Ngọzi
Zaghachi Alicia Guerrero
Maite Sosa dijo
Ọ bụla akụkọ dị mma nke ukwuu MA m nwere a nnọọ wetara ahụmahụ banyere ọrụ amaghị maka a DSP na m na-eche na ihe niile bụ ọcha ụgha. M banyere asọmpi ahụ ma ha anabataghị m ma rue taa ana m eche maka nkọwa ederede na ihe ọ bụla. Echere m na ebe a na Spain ndị na-ahọpụta ndị na-ahọpụtaghị ndị a zụrụ azụ Ha ekwughị nke ọma n'oge nhọrọ na ọbụlagodi nkọwa na enweghị nzaghachi achọrọ. Echere m na ọ bụ onyinye na-eduhie eduhie. Enwere m obi nkoropụ ma nwee olileanya na onye nwe amazon nwere ike ịgụ nke a ma mee ihe ma tinye ndị ruru eru maka ọrụ a. Lee ma ọ bụrụ na ịnweghị onye n'ime amazon nke Spain, hapụ ohere iji bụrụ DSP. Ezigbo mmechuihu na ndị Amazon Spain. Ha kwesiri idozighari ihe nile. Daalụ
Zaghachi Maite Sosa
Anụla m mgbe niile banyere AMAZON, enwekwara m mmasị isonye.
Zaghachi Angel H. Bonilla P.
Macarena Lopez Buiza dijo
The "Chinese" na akuku m n'okporo ámá, na SEVILLA, weghachi gị ihe mgbe ha tiwara. AMAZON ghotara na ngwa ahia abiala imebi, ma choro ka I kwuo ugwo ugwo ozo. Enweghị mmasị ndị Yankees. M na-ekwe ka otu aghụghọ. CHUNGOS oke CHUNGOS. Ogo, Irè na arụmọrụ abụghị nke gị.
Zaghachi Macarena López Buiza
Chọta ụdị na AliExpress
Melite PayPal na PrestaShop